Ulwakhiwo kunye nezoLimo-I-AOOD Technology limited
Amakhonkco eslip asetyenziswe kulwakhiwo kunye nezixhobo zolimo kufuneka zibenendlela eyomeleleyo kunye nokusebenza okuthembekileyo ngenxa yokuba aba matshini banzima bahlala besebenza phantsi kweemeko zangaphandle ezingqongqo. Iringi yesiliphu njengeyona nto ibalulekileyo kwezi nkqubo zintsonkothileyo ezifuna ukugqithisa onke amandla, uphawu, idatha evela kulwakhiwo olungagungqiyo ukuya kulwakhiwo olujikelezayo, kufuneka yoyise iindawo ezahlukeneyo ezifunayo kwaye isebenze ngokugqibeleleyo kulo naluphi na uhlobo lwendalo, ikwafuna ukulungela umsebenzi omde izangqa ziyasebenza.
I-AOOD inikezelwe ukusombulula amandla, umqondiso kunye nokuhanjiswa kwedatha kweendawo ezifunayo. Iinjineli ezinobunkunkqele kunye netekhnoloji yokuvelisa eyahlukileyo yenza ukuba i-AOOD ibonelele ngeesistim zeringi ezomeleleyo kwezi zixhobo zinzima. Umzekelo:
● Amakhonkco esiliphu angangeni manzi okusongela i-baler wrappers
● Ubukhulu obukhulu ngokusebenzisa amakhonkco esiliphu sokuxuba isixube sesamente
● Izangqa zokulwa ukungcangcazela kunye nesiliphu sokulwa nesothuso kwizixhobo zemigodi
● Izilingi ezenziwe ngokwezifiso zeekhreyithi, izixhobo zokuphakamisa, oomatshini bezibuko, abembi bezinto zakudala
Ukusuka kuyilo ukuya kuvavanyo lokugqibela, ukusebenza kwe-AOOD ngokusondeleyo kunye nabathengi, uwuqonde ngokupheleleyo umsebenzi oya kuthi umsesane wesiliphu uqonde kwaye usebenze kwindawo yokusebenza, unikele ingqalelo kwinkcukacha nganye, uqinisekise ukuba isiliphu somzekelo yento efunwa ngumthengi.
Iimveliso ezinxulumene noko: Ngokusebenzisa Imisesane yeSlip Bore, Imisesane yesiqhelo seSlip